Fandraisana ny bilaoginao amin'ny "A-List" | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 17, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Eny ary, fa manana anao eto aho, aza tezitra ary miala. Henoy izay lazaiko aminao.
Misy lelafo mamakivaky ny tontolon'ny bilaogy ankehitriny ao amin'ny bilaogin'i Nicholas Carr, Ilay lehibe mbola tsy novakiana. Shel Israely ao anatin'ilay adihevitra, toy ireo bilaogera hafa iray taonina (ohatra).
Tokony hamaky ny lahatsoratr'Andriamatoa Carr alohan'ny hamakiana izay holazaiko ianao. Manantena aho fa hampita ara-drariny ny hafany… Heveriko fa izay lazainy dia hoe vitsy dia vitsy ireo bilaogera “A-List” tena tsara ka tokony hanipy lamba famaohana fotsiny ny olon-drehetra.
Raha te ho tonga amin'ny "A-List" ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ianao dia mila mamaritra aloha izay lisitra izay. Anjaranao… tsy Nick Carr, tsy Technorati, tsy Google, tsy Yahoo !, tsy Typepad na WordPress. Ny "A-List" dia tsy faritan'ny isan'ny hira azonao, ny habetsaky ny fizarana pejy, ny loka azonao na ny habetsaky ny dolara ao amin'ny kaonty Adsense anao. Raha izany dia mety diso ny antony anaovanao bilaogy.
Tongasoa eto Douglaskarr.com, iray amin'ireo Great Unread. (Okay, mety tsy dia tsara loatra)
Ny olana dia ny 'sekoly taloha' amin'ny fanaovana doka amin'ny haino aman-jery. Izany lalàna izany dia milaza fa arakaraka ny ahitan'ny maso ny doka anao no mahatsara anao kokoa. Ny sekoly taloha dia milaza raha mahazo zato pejy an'arivony maro ianao, dia mahomby. Zato mpivady ary tsy maintsy tsy fahombiazana ianao. Ianao dia ao amin'ny Great Unread. Io fisainana io indrindra no mitarika ny indostrian'ny sarimihetsika, ny indostrian'ny gazety ary ny fahitalavitra amin'ny tambajotra. Ny olana dia mandoa vola lafo ianao amin'ireo eyeballs ireo, nefa tsy miverina. Ny olana dia tsy mila an'ireny masomaso rehetra ireny ianao fa mila mitondra ny doka eo amin'ny masony mahitsy fotsiny.
Ny “A-List” -ko dia tsy mitovy amin'i Seth Godin's, Tom Peter's, Technorati's, Shel Israel's, na Nick Carr's. Tsy mila mpamaky iray tapitrisa aho. Azo antoka fa faly aho satria mitombo hatrany ny statistiko. Mazava ho azy fa te hampitombo ny mpamaky sy ny fitazonana ny mpamaky ao amin'ny bilaogiko aho. Saingy tena tsy liana afa-tsy amin'ireo olona manana olana mitovy aho ary mitady vahaolana mitovy amiko.
Izaho dia bandy manam-pahaizana-marketing-teknolojia-geek-kristiana-ray izay mipetraka any Indiana. Tsy hifindra any New York na any San Francisco aho. Tsy mitady ho manankarena aho (fa tsy hitaraina raha manao izany!). Miara-miasa amina vondrona marketing sy teknolojia eto Indianapolis sy ny manodidina aho. Mianatra sy mampiharihary ny fitorahana bilaogy amin'ny olon-drehetra 'my' (mpivady am-polony samy hafa!). Ary mizara ny zavatra niainako, ny eritreritro, ny fanontaniako ary ny mombamomba ahy amin'ireo olona liana aho.
Hitanareo, rehefa mahazo ny hevitro avy amin'i Shel Israel, Tom Morris, Pat Coyle, ny fianakaviako, ny namako, na olon-kafa izay hajaiko sy zaraiko… Efa nahavita ny "A-List" aho. Raha tsy izany no hevitrao momba ny “A-List” dia tsy maninona. Angamba tsy te ho eo aminao aho. Samy hafa ny fahitanay ny fahombiazana.
Iray amin'ireo tsy mbola namaky lehibe
Mpitsara Halts NSA Snooping
17 Aogositra 2006 à 10:09
ataoko fa tonga lafatra ny voalazanao. ny olona dia mila mandrefy ny tanjona ho any amin'izay antenaina. rehefa tonga amin'izany izy ireo dia mankamin'ny fanamby manaraka.
17 Aogositra 2006 à 10:40
Mandeha - manaiky tanteraka.
Namolavola eritreritra vitsivitsy momba ity firaisana tsikombakomba A-lister ity ny tenako.
Misaotra betsaka amin'ny "quasi-marketing-technology-geek-Christian-father dude", btw. Afaka namariparitra ny tenako toy izany koa aho!
Aug 18, 2006 amin'ny 3: 52 AM
Hevitra mahafinaritra sy lahatsoratra grwat. Hifandray aho. MISAOTRA
Aug 18, 2006 amin'ny 6: 34 AM
Ary tsarovy fa nitory tamin’ny olona an’arivony i Jesosy, nefa nampiofana 12. Ary nahatoky ireo roa ambin’ny folo lahy ireo. Dia jereo ny nalehany!!